Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal मंगलबारदेखि चिनियाँ खोप : कुन उमेर समूहलाई कहिले ? | Aafno Khabar
मंगलबारदेखि चिनियाँ खोप : कुन उमेर समूहलाई कहिले ?
२०७८ जेष्ठ २४ गते ११:४१ प्रकाशित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई भोलिदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । महानगरले सूचना जारी गरी सो जानकारी दिएको हो । पहिलो मात्रामा भेसोसेल (चाइनिज) खोप लगाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ ।
जेठ २५ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म चल्ने खोप कार्यक्रम बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म खोप लगाइने छ । जसको लागि नजिकको वडा कार्यालयमा गएर खोप लगाउन सकिन्छ । खोप लगाउनका लागि उमेर खुल्ने परिचय पत्र साथै लैजानुपर्नेछ ।
कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिले भने संक्रमणको निको भएको एक महिना पूरा भएपछि मात्रै खोप लगाउन पाउनेछन् । २६ गते ६३ वर्षका, २७ गते ६२ वर्षका, २८ गते ६१ वर्षका र अन्तिम दिन अर्थात् २९ गते ६० वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको महानगरपालिकाकाले जनाएकाे छ ।
कुँवरले खोप लगाउने केन्द्र भने सोमबार तय गर्ने जानकारी दिए । अधिकांश केन्द्रहरु पुरानै भए पनि एक/दुईवटा केन्द्र फरक हुनसक्ने बताइएकाे छ ।